Ọzụzụ Nlekọta na Ọganihu
Ọhụrụ na Development Ngwaahịa na ule
Banyere gam akporo:
Android os (sistemụ arụmọrụ) bụ Google nke Google na-eji ya eme ihe site na 80% nke smart phones n'ụwa. Ọ pụtara na enwere ohere dị egwu android ndị mmepe maka ọdịnihu ha. Ọ bụrụ na anyị tụlee eziokwu na ọgbọ ndị ọzọ nke ndị ọrụ Intaneti (nke karịrị nde 1) nwere ike ịnweta ịntanetị maka oge mbụ na ha mobile. Mmepe bụ ikike ịmepụta arụmọrụ na ngwa ngwa a kwadobere maka ngwa gam akporo nke ga-enye gị ohere dị egwu iji jikọọ ọnụ ọgụgụ ndị na-agbanye na internet ha na-eme ka ekwe ntị nwee ike ịchọta ozi ọ bụla gbasara ihe ọ bụla mgbe ị na-eje ije ma ọ bụ na-agagharị n'ụgbọala ma ọ bụ ụgbọ oloko .
Ọ dị mma maka ndị na-anụ ọkụ n'obi banyere ịmalite ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, na usoro nke ịtụgharị onwe ha n'aka ndị na-emepụta ihe n'aka ndị okike, enwere ọtụtụ nhọrọ ịchụso nke ga-arụ ezigbo ọrụ nke inyere gị aka ịmụta usoro nke usoro mmemme Android na Java. Ị ga-achọpụtakwa na ị malitela ịmalite ịghọ ọkachamara gam akporo.
Ezubere usoro ọzụzụ Ọzụzụ maka ụmụ akwụkwọ ndị ọhụrụ na gam akporo ma chọọ ịmụta otú ha ga - esi wulite ngwa ngwa Android ma nwalee ha. Ezi ihe gbasara nkuzi a bụ na ịkwesighi ka ọkachamara ọkachamara na ịdebanye aha gị n'ime usoro ọzụzụ ọzụzụ a. Ọ bụrụ na ị maara otú e si eji ekwentị nwere ike iji sọfụfụ ma ọ bụ zigara ndị enyi gị foto na ozi gị, ọ ga-ezu.
Ịmụta ihe Ọhụrụ adịghị mfe:
Dị ka ị maara na ịmụta ihe ọ bụla ọ bụla adịghị mfe ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa Android / Nwale ma ọ bụ ịmepụta foto site na iji Photoshop ma ọ bụ CorelDraw. Ị ghaghị ịnwe mmasị na ịnụ ọkụ n'obi ịmụta ihe dị ọhụrụ wee gaa n'ihu iji nweta ọrụ na ya. Ezi nkuzi Ọzụzụ gam akporo na nkuzi na gam akporo mmepe / Ule ga-enyere gị aka ịgafe usoro nke ịme ihe kachasị ngwa ngwa gam akporo ngwa ngwa nke na-ebute ihe dị elu na nhazi na arụmọrụ.
Ịhọrọ Ụlọ Ọrụ Ọzụzụ Kasị Mma:
Site na njedebe nke Ọzụzụ Ngwá Ọrụ gam akporo, ị ga-enwe ihe ọmụma zuru oke iji zụlite & Nyocha ngwa ngwa dị mfe ma dị ike ị nwere ike ịkekọrịta na ndị ị maara. Ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ onye na-enye ọzụzụ n'ụzọ amamihe dị na ya ebe ọ bụ na ọ bụ nanị ụlọ ọrụ nchịkwa IT, dị ka Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ, nwere ọrụ dị mkpa na ihe ọmụma na-enye gị.
Oghere Red Hat OpenStack Administration (CL210) Ọzụzụ na Gurgaon